Naftiisa Ayuu Halis U Geliyey Si Uu U Badbaadiyo Nafo Kale. WQ: Cabdishakuur Muxumed (Heersare) | Gacanlibaaxnews
May 4, 2018 - Written by maamule
Cabdiqabi Xuseen Xasan waa wiil 16 jir. Waxa uu ku nool yahay degmada Maxamuud Haybe ee magaalaada Hargeysa. Waa wiilka ku dhaqaaqay tallaabada nafhurnimada ah ee uu ku badbaadinayey labada nafood ee kale. Waxana uu hawlgalkan badbaadinta ah sameeyey dhawaan markii roobka baaxadda weyni ka da’ay magaalada Hargeysa, ee daadku qaaday qoyskii deggennaa balliga Qudhacdheer ee is la degmada Maxamuud Haybe ee magaalaada Hargeysa. Qoyska oo ku jiray guri sandaqad, ayaa markii uu daadku jiidhay ee biyuhu meel kasta uga soo galeen, waxa ku sugnaa lix carruur ah iyo hooyadood, waxana uu daadku dhuftay oo uu qaaday saddex carruura oo laba ka mid ahi dhinteen la na badbaadin kari waayey.
Waxa hadalkiisa ka muuqata inuu yahay wiil hore u bartay dabbaasha, hasayeeshee biyaha rogmanayey ee uu u badheedha y ee xawliga ku soconayey ay mar kasta naftiisa halis gelin karayeen. Waxa se uu naftiisa ka hor mariyey inuu nafaha kale badbaadiyo, isaga oo wax na is bidiyey. Aan mar kale ku noqonno hadalkii Cabdiqani, isaga oo sharaxaada sii wata ayaa waxa uu yidhi: “Waxa aan sii dabbaasha ba oo kol ba aan gebi ka sii gudba ba, halkii ayaan ugu tegay labadii yar yaraa. Kii yaraa ayaan markii ba soo qaaday, kii weynaa na waxa aan ku idhi ‘qabso oodda.’ Kii yaraa markii aan soo qaaday ayaan u keenay hooyadii. Kii kale na gacanta ayaan soo qabtay oo waan soo kaxeeyey. Anigu maan ogayn in labo kale ay maqan yihiin, ee markii aan inankii yaraa u keenay ayay hooyadii igu tidhi ‘labo kale ayaa maqan.’ Mar kale ayaan haddana isku qaaday oo aan labadii kale raadiyey. Biyihii ayaan galay oo waan baadhay oo wax ba waan waayey. Markii aan waayey, ayaanu meeshii ka saaray afartii carruurta ahaa iyo hooyadood.”